Baby Hair ကလေးဆံပင်
၁။ သမီးလေးအသက်က ၁၀ လပါရှင့်။ ဆံပင်ပေါက်နည်းလို့ ဆေးလေးညွန်ပေးပါရှင့်။ ၂။ ဆရာ ကျမအသက်က ၃၇ထဲမှာပါ။ သမီးတွေကတော့ ၆နှစ်နဲ့ ၄နှစ်ပါ။ ဆံပင်ပါး (နည်း) ကြတယ်။ အဲ့ဒါ ထူလာအောင် ဘယ်လိုအစားအစာ ဘယ်လိုအရာတွေများ သုံးလို့ရမလဲ ညွှန်ပေးပါလား။ ကတုံးတော့ မတုံးစေချင်တော့ဘူး။ အချိန်ရရင် ပြန်ဖြေပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
By	Baby Health	· 20 Mar 2019
၁။ သမီးလေးအသက်က ၁၀ လပါရှင့်။ ဆံပင်ပေါက်နည်းလို့ ဆေးလေးညွန်ပေးပါရှင့်။
၂။ ဆရာ ကျမအသက်က ၃၇ထဲမှာပါ။ သမီးတွေကတော့ ၆နှစ်နဲ့ ၄နှစ်ပါ။ ဆံပင်ပါး (နည်း) ကြတယ်။ အဲ့ဒါ ထူလာအောင် ဘယ်လိုအစားအစာ ဘယ်လိုအရာတွေများ သုံးလို့ရမလဲ ညွှန်ပေးပါလား။ ကတုံးတော့ မတုံးစေချင်တော့ဘူး။ အချိန်ရရင် ပြန်ဖြေပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1. Mild baby shampoo အပျော့စား ဘေဘီရှန်ပို တစက် + ရေခပ်နွေးနွေးကို ကလေးဆံပင်မှာတင်ပြီး ညင်ညင်သာသာ စက်ဝိုင်းပုံပွတ်ပေးပါ။ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ဆီတွေကင်းစင်စေပြီး ဆံပင်ပေါက်လာမှာကို အားပေးတယ်။ ရေနဲ့ စင်အောင်ဆေးပါ။ တဘက်နူးညံ့တာသုံးပါ။
2. Mineral oil ခေါ် သဘာဝဆီလမ်းပေးပါ။
3. Switch up the direction ကလေးညအိပ်အနေအထား ပြောင်းပေးပါ။
4. Growth stage ဆံပင်ကြီးထွားချိန် ၃ နှစ်နဲ့ Resting stage နားချိန် ၃ လကြာတယ်။ နားချိန်မှာဆံပင်တွေဟာ ဖေါ်လီကယ်ခေါ်အတွင်းမှာသာနေသေးတယ်။ နောက်ပေါက်လာ ကြီးထွားလာတယ်။ ဆံပင်စုစုပေါင်းရဲ့ ၅-၁၅% တို့က နားနေချိန်မှာနေတယ်။ နေမကောင်းတာ၊ စိတ်အလိုမကျတာ၊ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲတာတွေကနေ သက်ရောက်နိုင်တယ်။ ဆံပင်ကျွတ်မယ်။
5. Tummy time ခေါ် ကလေးဝမ်လျှားမှောက်နေချိန်အတွက် အချိန်မနည်းစေရ။ လည်ပင်းနဲ့ ဦးခေါင်းကို သန်မာစေတယ်။
6. Cradle cap ခေါ် ပုခက်ထဲမှာသုံးတဲ့ ကလေးခေါင်းစွပ် နေ့စဉ်လဲပေးပါ။ ဆံပင်ကို နူးညံတဲ့ဘီးနဲ့ဖီးပေးပါ။ ဆံပင်ထဲမှာ အဖြူဖတ်လေးတွေရှိရင် ဆံပင်ပေါက်လားရာနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ဘီးနဲ့ဖီးပေးပါ။
7. Vitamins and minerals ဗီတာမင်နဲ့ ဓါတ်ဆားပါ ကလေးအားဆေးတိုက်ပါ။
• Babies and Vitamins ကလေးငယ်နဲ့ ဗီတာမင် http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/babies-and-vitamins.html
• Hair Health ဆံပင်က သင့်ကျန်းမာရေးကို ပြောနေတယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-health.html
• Hair Loss (1) ဆံပင်ကြွတ်ခြင်း (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-loss.html
• Hair Loss in Women Treatments ဆံပင်ကျွတ်တာ ဘာနဲ့ကုမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-loss-in-women-treatments.html
• Scalp Fungus ဆံပင်မှို http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/scalp-fungus.html
• Tonics for Children ကလေးအားဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/tonics-for-children.html
၁။ သမီးလေးအသကျက ၁၀ လပါရှငျ့။ ဆံပငျပေါကျနညျးလို့ ဆေးလေးညှနျပေးပါရှငျ့။
၂။ ဆရာ ကမြအသကျက ၃၇ထဲမှာပါ။ သမီးတှကေတော့ ၆နှဈနဲ့ ၄နှဈပါ။ ဆံပငျပါး (နညျး) ကွတယျ။ အဲ့ဒါ ထူလာအောငျ ဘယျလိုအစားအစာ ဘယျလိုအရာတှမြေား သုံးလို့ရမလဲ ညှနျပေးပါလား။ ကတုံးတော့ မတုံးစခေငျြတော့ဘူး။ အခြိနျရရငျ ပွနျဖွပေေးပါဆရာ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
1. Mild baby shampoo အပြော့စား ဘဘေီရှနျပို တစကျ + ရခေပျနှေးနှေးကို ကလေးဆံပငျမှာတငျပွီး ညငျညငျသာသာ စကျဝိုငျးပုံပှတျပေးပါ။ အညဈအကွေးတှနေဲ့ ဆီတှကေငျးစငျစပွေီး ဆံပငျပေါကျလာမှာကို အားပေးတယျ။ ရနေဲ့ စငျအောငျဆေးပါ။ တဘကျနူးညံ့တာသုံးပါ။
2. Mineral oil ချေါ သဘာဝဆီလမျးပေးပါ။
3. Switch up the direction ကလေးညအိပျအနအေထား ပွောငျးပေးပါ။
4. Growth stage ဆံပငျကွီးထှားခြိနျ ၃ နှဈနဲ့ Resting stage နားခြိနျ ၃ လကွာတယျ။ နားခြိနျမှာဆံပငျတှဟော ဖျေါလီကယျချေါအတှငျးမှာသာနသေေးတယျ။ နောကျပေါကျလာ ကွီးထှားလာတယျ။ ဆံပငျစုစုပေါငျးရဲ့ ၅-၁၅% တို့က နားနခြေိနျမှာနတေယျ။ နမေကောငျးတာ၊ စိတျအလိုမကတြာ၊ ဟျောမုနျးပွောငျးလဲတာတှကေနေ သကျရောကျနိုငျတယျ။ ဆံပငျကြှတျမယျ။
5. Tummy time ချေါ ကလေးဝမျလြှားမှောကျနခြေိနျအတှကျ အခြိနျမနညျးစရေ။ လညျပငျးနဲ့ ဦးခေါငျးကို သနျမာစတေယျ။
6. Cradle cap ချေါ ပုခကျထဲမှာသုံးတဲ့ ကလေးခေါငျးစှပျ နစေ့ဉျလဲပေးပါ။ ဆံပငျကို နူးညံတဲ့ဘီးနဲ့ဖီးပေးပါ။ ဆံပငျထဲမှာ အဖွူဖတျလေးတှရှေိရငျ ဆံပငျပေါကျလားရာနဲ့ ဆနျ့ကငျြပွီး ဘီးနဲ့ဖီးပေးပါ။
7. Vitamins and minerals ဗီတာမငျနဲ့ ဓါတျဆားပါ ကလေးအားဆေးတိုကျပါ။
• Babies and Vitamins ကလေးငယျနဲ့ ဗီတာမငျ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/babies-and-vitamins.html
• Hair Health ဆံပငျက သငျ့ကနျြးမာရေးကို ပွောနတေယျ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-health.html
• Hair Loss (1) ဆံပငျကွှတျခွငျး (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-loss.html
• Hair Loss in Women Treatments ဆံပငျကြှတျတာ ဘာနဲ့ကုမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-loss-in-women-treatments.html
• Scalp Fungus ဆံပငျမှို http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/scalp-fungus.html
• Tonics for Children ကလေးအားဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/tonics-for-children.html
baby health hair 548 Views
Placental Previa အခငျြးရှရေ့ောကျ အမေး
Risks of an X-ray and Diagnostic ultrasound အာလျထှာဆောငျးနဲ့ ဓါတျမှနျအန်တရာယျ
Female Orgasm (2) အမြိုးသမီးပွီးခွငျး (၂)